Johnson and Johnson to give Africa 400M vaccines - DTNext.in
Johnson and Johnson to give Africa 400M vaccines
Published: Mar 29,202111:44 PM by PTI
Johnson & Johnson says it's agreed to provide up to 400 million doses of its one-dose COVID-19 vaccine to African countries, starting this summer.
The company's vaccine still must receive authorisation from regulators in the African countries, but the World Health Organization approved it for emergency use on March 12.
J&J also has a tentative agreement with Gavi, the Vaccine Alliance, to help support the WHO-backed COVAX program to get COVID-19 vaccines to 190 low-and middle-income countries, many of them in Africa. Johnson & Johnson and Gavi still need to sign an advance purchase agreement to provide up to 500 million doses of J&J's vaccine to that program through 2022.
Aspen Pharmacare of South Africa, which is part of J&J's global supply and manufacturing network for its vaccine, will support vaccine shipments to the African Union.
In late-stage testing, J&J's vaccine prevented about 67per cent of symptomatic infections with the coronavirus and was 85per cent effective at preventing severe disease, beginning 28 days after vaccination.
Johnson and Johnson | Covid Vaccine African Countries